ခေတ်စားနေတဲ့ ဓာတ်ပုံပြုပြင် apk Meitu 7.0.1.5 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Android Application Phone Application ခေတ်စားနေတဲ့ ဓာတ်ပုံပြုပြင် apk Meitu 7.0.1.5
ခေတ်စားနေတဲ့ ဓာတ်ပုံပြုပြင် apk Meitu 7.0.1.5
Maung Pauk at 10:56:00 PM Android Application, Phone Application,
ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရသလို ဓာတ်ပုံတွေကို ပုံအမျိုးမျိုးပြုပြင်နိုင်ပါတယ်.. Effect ပေါင်းများစွာပါဝင်ပြီး ခုတလော ဒီ apk နဲ့ ပြုပြင်ထားတဲ့ ပုံတွေကို တော်တော်များများ အသုံးပြုလာကြပါတယ်.. မျက်လုံး၊ မျက်ခုံး၊ နှာခေါင်းတွေကအစ တကယ့်ကို စနစ်တကျ ပြုပြင်လို့ရပါတယ်.. မျက်နှာပေါ်က ဝက်ခြံတွေကိုလည်း ဖျောက်ပစ်နိုင်ပါသေးတယ်.. မျက်နှာ အတိုအရှည်၊ ကျယ်အကျဉ်းကအစ တကယ့်ကို Computer သုံးပြီး ပြုပြင်သလို ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်.. Tech Magic ကင်မရာနဲ့ရိုက်ပြီး Funny Effect တွေကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်..
ဓာတျပုံရိုကျလို့ရသလို ဓာတျပုံတှကေို ပုံအမြိုးမြိုးပွုပွငျနိုငျပါတယျ.. Effect ပေါငျးမြားစှာပါဝငျပွီး ခုတလော ဒီ apk နဲ့ ပွုပွငျထားတဲ့ ပုံတှကေို တျောတျောမြားမြား အသုံးပွုလာကွပါတယျ.. မကျြလုံး၊ မကျြခုံး၊ နှာခေါငျးတှကေအစ တကယျ့ကို စနဈတကြ ပွုပွငျလို့ရပါတယျ.. မကျြနှာပျေါက ဝကျခွံတှကေိုလညျး ဖြောကျပဈနိုငျပါသေးတယျ.. မကျြနှာ အတိုအရှညျ၊ ကယျြအကဉျြးကအစ တကယျ့ကို Computer သုံးပွီး ပွုပွငျသလို ပွုပွငျနိုငျပါတယျ.. Tech Magic ကငျမရာနဲ့ရိုကျပွီး Funny Effect တှကေိုလညျး ဖနျတီးနိုငျပါတယျ..
One of the BEST FREE photo editing apps in the world
- Brand New Tech that automatically turns your portraits into stylish illustration!
• Get flawless skin, sparkly eyes, straightened nose, whitened teeth etc. in just ONE click!
• Eyes – brighten and enlarge your eyes, don’t forget to erase unnecessary dark circles too
• Body shape – ever thought of getting skinnier plus taller? Do it with meitu!
• With AI technology, meitu auto detects your facial features and is able to add cute motion stickers or hand-drawn effects to your face while taking selfies.
Download : 48.01 MB